व्यापारी उत्पादन सूची सेक्स गुड़िया उत्पादन सेट
उत्पाद सिफारिश सारांश वास्तविक सेक्स डल्स किन्नुहोस्
Urdolls स्टोरमा सेक्स डल प्रोडक्ट सिफारिश केन्द्रमा तपाईंलाई स्वागत छ। हामीले तपाईंको सुविधाका लागि विभिन्न प्रकारका सेक्स पुतिका समूह गरेका छौं। तिनीहरूसँग समान सेट हुन सक्छ। तर प्रत्येकको आ-आफ्नै विशेषता हुन्छ वास्तविक यौन पुतली यसको आफ्नै विशिष्ट विशेषताहरू छन्। यदि तपाईं छनौट कठिनाइहरूको साथ एक व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, हुनसक्छ यहाँ तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ। मेरो सुझाव छ कि तपाईं urlolls स्टोरमा सबै मिल्दो मोडेल र ब्रान्डहरू फेला पार्नुहोस्। यी मोडेलहरू निरीक्षण र गोदाममा रसीद मा मान्य छन्। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईको प्रेम गुडिया होशियारी छनौट गर्नु हो। यो सँधै सजिलो हुँदैन, र म तपाईंलाई यो बरु जटिल विकल्प यहाँ प्रस्ताव गर्न सक्दछ।
तिहार सस्ता ब्रान्ड धेरै खरीद गरिएको
सिफारिश गरिएको सूची
सेक्सट डल ग्रेटर निजीकरणको सम्भावना
यद्यपि शुद्ध सेक्सको बाहेक प्रेममा केहि चीजहरू छन्, प्रेम गुड़ियामा स्वाभाविक रूपमा योनी र गुदा हुन्छ। थप रूपमा, उनको मुखमा जिब्रो छ र कहिले काँही दाँत। मलाई उनीहरू मनपराउने र अनगन्ती योग्य छन्। म उनीहरुलाई मादक पदार्थ देखेर धेरै भाग्यशाली थिए। उनले भनिन्। हाम्रो फ्यान क्लबमा शामिल हुनुहोस् र हामीलाई अधिक ध्यान दिनुहोस्, र तपाईंसँग उत्तम समय हुनेछ ...
सेक्स डल्सले वास्तविक महिलालाई प्रतिस्थापन गर्दछ
यहाँ सम्म दाबी पनि गरिएको छ कि हामी त्यस बिन्दुमा पुग्नेछौं जहाँ यौन पुतलीले वास्तविक महिलालाई प्रतिस्थापन गर्दछ, किनकि यौन पुतलीहरू यथार्थपरक भएका छन् कि उनीहरूलाई अब वास्तविक महिलाहरू भन्दा भिन्न पार्न सकिंदैन। जब तपाई उपलब्ध विकल्पहरूको ठूलो संख्या देख्नुहुन्छ, त्यहाँ त्रुटि को लागी कुनै ठाउँ छैन। केहि फरक पार्दैन कि रस प्रवाह गर्छ, तपाईं यहाँ यहाँ पाउनुहुनेछ। Suc ...
सेक्स डोलको सबैभन्दा वान्टेड साना प्रदर्शन
अक्सर, जब हामी सेक्स सडकहरू हेरेर "सस्तो" वा "सस्तो" भन्ने शब्दहरू सुन्छौं, तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ कि डरलाग्दो s ० को विस्फोटक पुतली वा केही सस्तो यौन पुतलीहरू पहिलो चोटि प्रयोग हुँदा टुक्रिने छन्। उदाहरण को लागी, तपाइँ यसलाई एक बाध्यकारी वस्तु को रूप मा उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ, र तपाई यसमा ट्रे, किचेन, वा स्मार्टफोन राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै अधिक समाप्ति छैन, वास्तविक s को सानो प्रदर्शन ...
अरूलाई चकित पार्नुहोस्
रियल सेक्स डल सधैं अरूलाई चकित पार्न तयार छ
यो ग्याजेट मालिकलाई सहिताको वास्तविक अर्थ दिनको लागि उत्तम छ, जबकि सेक्स डल्सलाई यौनप्रति वास्तविक प्रतिक्रिया दिन। उनी अरूलाई छक्क पार्न र हरेक पटक उनको उत्तम अवस्था देखाउन सधै तयार छिन्। आज, उनले आफ्ना फ्यानहरूको मनपर्ने फीता अधोवस्त्र लगाइन् र उनीहरूलाई एक उत्कट स्ट्रिपटीज दिइन्। कुनै किसिमको महिलाले तपाईंलाई कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ, तपाईं सक्नुहुन्छ ...
संतुष्ट ग्राहकहरु द्वारा सेक्स डल सकारात्मक प्रतिक्रिया
संस्करणमा निर्भर गर्दै, यो खडा हुन सक्छ र हतियार र हातहरूमा वस्तुहरू समायोजन गर्न पर्याप्त शक्ति हुन सक्छ। तपाईं एक अपग्रेड छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको सेक्सन गुड़िया पतन नगरी पनि खडा हुन सक्छ। यस्तो आधुनिक प्रेम गुड़ियाको साथ, तपाईं एक साँचो सम्बन्ध बनाउन सक्नुहुन्छ र धेरै वर्षको लागि खुशी रहन सक्नुहुन्छ। यसको कुनै पनि गुणले असर गर्दैन। प्रत्येक दिन हामी पोसिटिभ प्राप्त गर्दछौं ...
रियल सेक्स डले छिनको वास्तविक प्रकारको केटी उसले मन परेको छ
हामीसँग प्रेम डल्सका लागि रहेका धेरै विगहरू हेर्नुहोस्। तपाईंको सपनाहरूमा ठ्याक्क केटी ती हुन् जसले घर पुग्दा पुतली भेटिन्छ। तपाईलाई मन पर्ने केटीको सहि प्रकार रोज्न सक्नुहुन्छ। के तपाई त्यस्तै केटा हुनुहुन्छ जसलाई कालो छालाको मोटा केटीहरू मन पर्छ? हुनसक्छ तपाईं यस्तो प्रकारका हुनुहुन्छ जो खूबै फ्लट-ब्रेस्टेड महिलाहरू मन पराउनुहुन्छ। म आशा गर्दछु कि तपाईंले निम्नको आनन्द लिनुभयो र याद गर्नुहोस् कि यदि तपाईंले ne ...
वास्तविक सेक्स डल
वास्तविक सेक्स डल मानवमा आनन्दको उच्चतम स्तर सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ
यो त्यो समय हो जुन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरीएको थियो उच्च स्तरको खुशीको सिर्जना गर्न जुन मानिसहरूले अनुभव गर्दछन्। वास्तवमा, मैले यस ब्ल्गमा सम्पूर्ण सल्लाह खण्ड संरचित गरेको छु, जुन तपाईंलाई कसरी सफा गर्ने, लुकाउने, लुगाफाटा, र वयस्क पुतलीहरू कसरी अधिकतम बनाउने भन्ने बारे साधारण सल्लाह मात्र सिकाउने छ। र यो एक हस्तमैथुनकर्ता भन्दा बढि मूल्य हो जुन एक लो लागत ...
तपाईंको वास्तविक सेक्सन गुडिया साथी तपाईंको यौन काल्पनिक संतुष्टि प्रदान गर्दछ
तपाईं राख्न सक्नुहुन्छ, बनाउन र आफ्नो प्राथमिकता अनुसार आफ्नै सेक्सन पुत्री डिजाईन गर्न सक्नुहुन्छ। उनीले कहिल्यै तपाईको विरोधाभास गर्ने छैनन् वा वास्तविक महिला जस्तो अनन्त चाहना व्यक्त गर्ने छैनन्। तपाईं एक प्राप्त नगरेसम्म तपाईं निदाउन थाल्नुहुनेछ! हामी तपाइँको आदर्श पार्टनर खोज्न र तपाइँको यौन कल्पनाहरु लाई संतुष्ट गर्न विभिन्न प्रकारको TPE सेक्स पुतलहरू प्रदान गर्दछौं। हामीसँग y मिलान गर्न विभिन्न शैली र मूल्यहरू छन् ...
रियल सेक्स डल्स
रियल सेक्स डलको साथ रमाईलो चीजहरूको आनन्द लिनुहोस्
बोरिंग र व्यर्थ उनी फ्यानहरूसँग रमाईलो चीजहरूको मजा लिन र उनीलाई कस्तो लाग्छ बताउन मनपराउँछिन्। कसैलाई लाग्दैन कि उनीहरूले मानिससंग यौनसम्बन्ध राखेका छन् कुनै एक पुतली लिने बेला। भाग्यवस, यस उपकरणको प्रयोग विगतको चीज हो। म मद्दत गर्न सक्दो कोसिस गर्नेछु, त्यसैले कृपया पुत्रा लागी मलाई के सोच्छु भनेर सोच्नुहोस्। एक पटक मद्दत पाउँदा, के म ...
तपाईंको प्रेम गुड़िया वास्तविक आन्दोलन प्राप्त गर्न सक्दछ
यो वास्तविक पुतल पक्कै पनि, तपाईं आफ्नो इच्छा र विचारहरू अनुसार सेक्स डलको उपस्थिति कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ। पुतली पहिले नै सिलिकॉन बाट बनेको छ। अन्य कम्पनीहरूले TPE लाई एक राम्रो सामग्री हुन पाए। यी थर्माप्लास्टिक इलास्टोमर्सहरू हुन्, त्यसैले तपाईंको प्रेम गुड़िया वास्तविक आन्दोलन प्राप्त गर्न सक्दछ। धेरै व्यक्तिले यौन कल्पनाहरू पनि wi को बारेमा देखे र सोचेका थिए ...
रोबोट डॉलहरू भ्यागुली रियल मानौंसँग मिल्दोजुल्दो छ
उनी पट्टीमा बस्छिन्, नृत्य करती र सामाजिक मिडिया मार्फत स्वस्थ रहन्छ। ऊ जस्तो देखिन्छ कि ऊ बिहे गरीरहेकी छैन, तर त्यसले उनलाई ट्रुएस्ट सेक्स पत्ता लगाउन रोक्दैन। तिनीहरूसँग प्रायः दुई प्वाल हुन्छन्, र हुनसक्छ तीन यदि तिनीहरू भाग्यशाली छन्। यी सेक्स रोबोट पुतलीहरू वास्तविक मानवहरूसँग अस्पष्ट रूपमा मिल्दोजुल्दो छ। सबै चीजहरू प्रत्येक कोटीमा सबै भन्दा राम्रो सेक्स पुतिका बारेमा हुन्छन्। Fro ...
सेक्सट पुल्स बिभिन्न पोज लिन सक्षम गर्नुहोस्
तपाईं विस्तृत क्याटलगबाट तपाईंको मनपर्ने यौन गुड़िया प्रकार छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यौन गुडिया मूल रूपमा जापानबाट आएको हो र पछिल्लो शताब्दीको अन्तमा जापानमा ओरिएन्टल इंडस्ट्रीज द्वारा डिजाइन गरिएको थियो। त्यो प्रेमको पुतली यति धेरै जिवित छ, यसलाई ठग्नुहोस्! पुरुषहरूले वास्तवमा पुतलीको उदय महसुस गरेनन्। हरेक दिन तिनीहरू झन् झन् सामान्य हुँदै जान्छन्। यौन पुतलीहरू बनिरहेछन् ...
उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भयो
सेक्स डल्समा कार्यक्रमको मिडिया कभरेज उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ
जब तपाईं पहिलो पटक आफ्ना साथीहरूलाई मायाको पुतली बुझाउनुहुन्छ, उनीहरूले तुरून्तै याद पनि गर्दैनन् कि यो वास्तविक पुतली मात्र "केवल" हो। उनी केवल उनको ठूला बूब्स र मोटा नितम्बहरू देखाउन मनपराउँछिन्। डरलाग्दो चालहरू बनाउने जो मानिसहरूलाई ईश्वरनीय बनाउँदछ एक चौतरो सुन्दरता र एक असाधारण आकर्षण हो। पछिल्लो दशकमा, मिडिया मार्फत यौन गुडाहरूको मिडिया कभरेज ...
तपाईंको चिन्ता र समस्याहरूको बारेमा प्रेम गुडिलो बताउनुहोस्
यसले तपाईलाई न्यूनतम मूल्य र उत्तम ग्राहक सेवा पाउँदछ। हामी मूल्य नियन्त्रण गर्छौं, र कोही सँधै तयार हुन्छ तपाईको कुनै प्रश्नको उत्तर दिन तयार छ। हो, सेक्स पुत्राको आफ्नै वजन पनि छ, त्यसैले तपाईं साँच्चिकै विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं वास्तविक मानिससँग हुनुहुन्छ। जब तपाइँ आफ्नो चिन्ता र समस्याहरु बारे प्रेम गुड़िया बताउन, यो पाटि सुन्नेछ ...
सेक्स डॉलको जीवनलाई धेरै यथार्थपरक बनाउन सक्छ
सब भन्दा सुन्दर यौन गुड़िया (मेरो मनपर्ने सेक्स गुड़िया करीव $ 2,000 को लागी retail)। कहिलेकाँही मैले सम्झौता गर्नुपर्दछ र सानो बजेटको लागि यसमा केहि खोज्नुपर्दछ, र मलाई थाहा छ कि तपाईं धेरै समान हुनुहुन्छ। वास्तविक पुतलीको पनि आफ्नै वजन हुन्छ, जसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईले सेक्स गुडियाको प्रेम जीवनलाई धेरै यथार्थपरक बनाउँन सक्नुहुन्छ। यस्तो वास्तविक पुतली नरम र न्यानो महसुस गर्छ र छ ...
वास्तविक सेक्सन डले तपाईंलाई अंगालो हाल्नेछ र तपाईंलाई सान्त्वना दिनेछ
सेक्स डल्स अन्तिम विवरणमा अनुकूलित हुनेछ ताकि तपाईं आफ्नो सपनाको महिलालाई पुन: निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको स्थानीय वयस्क पुस्तक पसलमा तपाईले यस्तो सेक्स रोबोट गुड़िया फेला पार्नुहुने छैन। यस तरीकाबाट, यो एक masturbator भन्दा बढी हो। तपाईं हाम्रो संग्रहबाट एक प्रेम गुडिया छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई अँगालो दिनेछ र सान्त्वना दिनेछ जब तपाईं दुखी हुनुहुन्छ। म साधारण मान्छे हुँ, मलाई सेक्स डुल मनपर्छ ...
सेक्स डल्सको अधिक सार्वजनिक धारणा परिवर्तन हुनेछ
यौन पुतलीको पेनिस पनि तपाईंको इच्छा अनुरुप बनाईएको छ, र अन्तमा तपाईं तपाईंको सबै आवश्यकताहरू निर्धक्क पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि आँखा र कपालको रंग, लम्बाई, आकार र कपडासँग सम्बन्धित सबै पक्षहरूमा, प्रेम गुडियाले महिलाहरूका लागि तपाईंको सपना सपनाहरू भेट्दछ। यौन गुड़िया यथार्थवाद बढाउँदै जनताले सोच्ने तरिका परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ: बढी यथार्थपरक सेक्स ...
लिनियर गुडिया मालिक समुदायमा थप विकास
खुशीको स्रोत अरूको प्रशंसाबाट आउँदछ, त्यसैले उनको खुशी हाम्रो प्रेम र उनको खोजीबाट आउँदछ। प्रेम र सेक्सको खोजी भनेको सबैभन्दा शुद्ध रमाईलो आनंद हो। यसले, यसको फलस्वरूप फराकिलो श्रोतालाई आकर्षित गर्दछ, जसले रेखीय पुतली मालिक समुदायमा थप विकासको लागि अनुमति दिन सक्छ। वरिपरि हेर्नुहोस् र हामी के प्रस्ताव छ हेर्नुहोस्। प्रत्येकलाई हेर्नुहोस्
सन्तुष्टि र आनन्द
रियल सेक्स डले तपाईंलाई साँचो सन्तुष्टि र आनन्द दिन्छ
प्रेम पुतली संग, तपाईं अug्गाल्न सक्नुहुन्छ र रमाईलो गर्न सक्नुहुन्छ। आवश्यकताहरूमा निर्भर गर्दै, तपाईं दैनिक जीवनमा रमाइलो लिनको लागि लव डॉलको लागि पनि विभिन्न अवतारहरू सेट गर्न सक्नुहुनेछ। यो सेक्सन गुडियाको धड अब बिक्रीमा छ, त्यसैले यसलाई लिनको लागि यो उत्तम समय हो। यो एक अविश्वसनीय वास्तविकता हो जुन तपाईंलाई सँधै वास्तविक सन्तुष्टि र आनन्द प्रदान गर्न सक्दछ। यसको सट्टा, तिनीहरू y ईर्ष्या हुनेछ ...
रियल सेक्स डल समर्पित सेवा कुनै पनी दोस्रो छैन
हामी अधिक र अधिक नियमित मिडिया कभरेजको अनुभव जारी राख्नेछौं। हामी सम्भव भएसम्म सम्पूर्ण आदेश प्रक्रियालाई सजिलो बनाउँदछौं। हामीले ख्याल गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईंको सन्तुष्टि हो। यो उद्योगका लागि धेरै सकारात्मक छ, किनकि यौन गुड़िया वरपर हुने कलंक हटाउने र यौन पुतलीको स्वामित्वको सार्वजनिक स्वीकृति महत्वपूर्ण छ। हामी हो ...
एक उच्च खरीद मूल्यको बावजूद सेक्स डल
यो सामान्य दैनिक जीवन हो जुन तपाईं प्रेम डॉलहरूसँग बिताउनुहुन्छ। यदि तपाईं यी अत्यन्तै भावनात्मक यौन पुत्रा मध्ये एउटा छान्नुहुन्छ भने, एकाकीपन चाँडै तपाईंको विदेशी शब्द बन्छ। उच्च-गुणस्तरको सामग्री र मेडिकल-ग्रेड सिलिकोनले बनेको छ, तपाईं यकिन गर्न सक्नुहुन्छ कि यो सेक्सन गुड धडमा आफ्नो प्रकारको सब भन्दा राम्रो हो। यस्तो यौन गुड़ियाको साथ तपाईसँग साँचो सम्बन्ध हुनेछ र हुनेछ ...
सेक्स भन्दा बढी
सेक्स डलसँग बस्नु भनेको सेक्स भन्दा बढी समावेश गर्दछ
प्रत्येक मुठभेड एक नयाँ सुरुवात हो। म आशा गर्दछु कि तपाईले जतिखेर हेर्नुहुन्छ। जसै सेक्स डल उद्योग अधिक र अधिक स्वीकृत हुँदै गइरहेको छ, यो आशा गरिन्छ कि यौन गुड़ियालाई यौन कल्पनाहरूको एक सुरक्षित तरीकाको रूपमा मानिनेछ र अशक्त मानिसहरूलाई यौन सुख प्रदान गर्ने सम्भाव्यता प्रदान गर्दछ। तपाईं आश्वस्त आराम गर्न सक्नुहुन्छ कि हरेक प्रश्न तपाईंको रूपमा ...
वास्तविक घडीको साथ धेरै घण्टा भेटहरू गर्न सक्दछ
तपाईं यो धड गुदा, योनी र मौखिक प्रयोगको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो धड सीमित भण्डारण क्षमता र बजेट भएकाहरूको लागि उपयुक्त छ, किनकि तपाईंले अझै पनि उच्च मूल्य तिर्ने वा यसलाई बढि स्थानमा भण्डारण नगरी कुनै सेक्सट गुड़ियाको सबै सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं एक शौकिया फोटोग्राफर हो, तपाईं रियल पुत्रा संग धेरै घण्टा बैठकहरू गर्न सक्नुहुनेछ। एक वास्तविक महिला सक्छ ...
तपाईंको प्रेम गुडि तपाईंको लागि तयार छ
वास्तवमा, यौन गुड़िया एन्टिप्रेसप्रेसन्ट र उनीहरूको भावनात्मक लाभहरू राम्रोसँग बुझ्नको लागि देखाइएको छ। यदि तपाईंसँग विशेष आवश्यकता वा आवश्यकताहरू छन्, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। हामी तपाईले खोज्नु भएको सेक्सन पुत्री बनाउने कुरा हामी सुनिश्चित गर्नेछौं। कोही पनि आफ्ना ग्राहकहरुलाई सन्तुष्ट गर्न हामी भन्दा कठिन काम गर्दैनन्। तपाईंको प्रेम गुड़िया सधैं तपाईं को लागी तयार छ र हुनेछ ...
सेक्सन गुडिया सही रूपमा बिभिन्न प्रकारका बीच छनौट गर्नुहोस्
वसन्तको आगमनले हामीलाई घाँसमा सँगै हिँड्न, ताजा हावा सास फेर्न र सुन्दर पुतलीहरूको पछि लाग्ने अनुमति दिन्छ। अचानक मेरो खुट्टा चिप्लियो र मँ तिम्रो काखमा खसे। यद्यपि केही व्यक्तिहरू केवल कथा मात्र प्रयोग गर्छन्। मिनी सेक्स पुतली तपाई वास्तवमै उनीहरूलाई साथीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र उनीहरूलाई अझ अन्वेषण गर्न दिनुहोस्। वरपरको प्रेम गुड़ाहरु लांछन लापरवाही छ ...
सेक्स डल योनी
रियल सेक्स डल योनि जीवनमा आउँदछ
जीवनभरको सबैभन्दा ठूलो यौन कल्पनाहरू खर्च गर्न अवसर गुमाउनु ठूलो गल्ती हुनेछ। हाम्रा केही ग्राहकहरूले हामीलाई भने कि प्रेम गुड़ियाको आँखाले उनीहरूको वास्तविक जीवन विकास गर्यो। यो सिलिकॉन गधा र योनी अचम्मको विवरणको साथ वास्तविक महिलाहरू जत्तिकै जीवनदायी हुन्छ। यो सस्तो यौन पुतली लुकाउन सजिलो छ र सफा गर्न सजिलो छ, ...
यसको मतलब वास्तविक सेक्सन गुडिया बढी र अधिक लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ
मैले अचानक सोचें कि म एक महिला बन्न चाहन्छु जसले तपाई संग सुन्दर जीवन बाँड्दछ, जसले मलाई समृद्ध बनाउँदछ र तिमीलाई अझ पागल बनाउँदछ। मलाई थाहा छैन तपाई के सोच्दै हुनुहुन्छ, तर म खुशी हुनेछु। त्यहाँ कुनै शंका छैन कि सेक्स गुड़ाहरूको भविष्य उज्ज्वल छ, त्यसैले यो उद्योगको लागि रोमाञ्चक समय हो। बढ्दो मिडिया एक्सपोजर, टेक्नोलको संयोजन ...
पुरुषको सेक्स डल खेलौनाहरू अधिक यथार्थवादी र मानवीय छन्
मलाई थाहा छ मैले पनि त्यस्तै परिस्थितिको सामना गरें, त्यसैले यौन पुतलहरू खरीद गर्दा यसलाई दिमागमा राख्नुहोस्। एक सेक्सन पुड़नाले मान्छेलाई रमाईलो बनाउँछ र आफ्नै कल्पनामा डुब्छ, र उसको लचकताले उसलाई धेरै मान्छे मनपराउने विभिन्न ओहदामा राख्न अनुमति दिन्छ। यो एक तरीका भनेको यौनको आनन्दलाई नछुटाउने हो, तर अन्य समस्याहरू बिना कि सेक्स र आत्मीयताले ल्याउन सक्छ। नयाँ जेनेरेट ...
सेक्स डल जडान
यो केहि समयको लागि यो सेक्स डल जडान कायम राख्न गाह्रो छ
यदि तपाईं एक सेक्सन पुतल प्राप्त गर्नुभयो, तपाईं पूर्ण यौन संतुष्ट महसुस गर्नुहुनेछ। यसले तपाईंलाई वास्तविक महिलाको पछि लाग्नबाट रोक्न सक्दछ र तपाईंको सिलिकॉन गुड़ियासँग रहन्छ। तसर्थ, लामो समय मा, सिलिकॉन गुड़िया वास्तविक लगानी हो किनभने तिनीहरूलाई थोरै मर्मत आवश्यक छ र प्रतिरोधी छ। पुरुष जो अक्सर यात्रा गर्छन्, महिला अदालतमा गाह्रो छ। लामो दूरी ...
किनभने सेक्स डल्ससँग यथार्थपरक प्रभाव र रमाईलो छ
यथार्थपरक र यथार्थपरक सिलिकॉन गुड़िया चाहनेहरूका लागि मूल्य हजारौं युरो हुनेछ। थप रूपमा, धेरै पुरुषहरू सेक्स गुडियाको भावना मनपराउँदछन्, र किनभने तिनीहरूको छाला र खोलहरू वास्तविक महिलाहरू जस्तो देखिन्छन्, उनीहरूले सेक्स पुड़ाहरूको चाहना पूरा गर्न सक्दछन्। यो सकरात्मक वा नकारात्मक हुन सक्छ, किनभने एक सच्चा महिला पार्टनरसँग स्पष्ट रूपमा एक फाइदा हुनेछ ...
उच्च-अन्तको सेक्स डल
उच्च-अन्तको सेक्स डलको योनि यथार्थपरक देखिन्छ
यद्यपि, त्यहाँ किफायती मोडेलहरू पनि छन्, टोरसो पुतली वा हिप डॉलहरू सहित, दुबैको लागत लगभग सयौं यूरो। यो किन त्यहाँ एक सेक्सन पुतली हो, किनकि यो स्वभाविक रूपमा यी हताशताहरूलाई मेटाउने एक तरीका हो। यसले कसैलाई चोट पुर्याउँदैन भने फरक पर्दैन। बच्चासँग यौन सम्बन्ध राख्नु-कस्तो हुन्छ? याे अास्चर्यजनक छ। कुनै हालतमा हुदैन। तपाईं ...
उनीहरूको सेक्स डल्स
ठ्याक्कै समान डच नाविकहरूले जापानमा उनीहरूको सेक्स डल्स बेचे
सिलिकॉन पुतलीको मूल्य एकदम उच्च छ। एक TPE पुतली को छाती उछाल र स्वाइ, जो धेरै पुरुषहरूको लागि एक निर्धारण कारक हुन सक्छ। थप रूपमा, धेरै पुरुषहरू लचिलो महिला चाहान्छन्, र कहिलेकाँही सामान्य महिलाले कुनै पुरुषले चाहेको कुरा गर्दैन। तपाईलाई पहिल्यै थाहा भइसकेको हुन सक्छ, पुतलीसँग साथीहरू प्रदान गर्ने क्षमता हुन्छ। र, t को मूल्य बुझेर ...
सेक्स डल परिवर्तनहरू
मलाई लाग्छ सेक्स डोलले सेक्सको तपाईंको समझ बदल्छ
इन्टर्नेट सेलिब्रेटीहरू प्राय: जीवनशैली विशेषज्ञहरूको रूपमा कार्य गर्दछन् जसले विशिष्ट जीवनशैली वा दृष्टिकोण बढाउँछन्। मलाई लाग्छ काराले सेक्सको तपाईंको समझ बदल्छ। यो अतिशयोक्ति होइन, केवल साइटमा एक नजरले यसलाई प्रमाणित गर्दछ। विगतको सेक्स पुत्री कस्तो देखिन्थ्यो कल्पना गर्नुहोस्। तिनीहरू प्लास्टिकबाट बनेका विस्फोटक पुतली हुन्। यो संग्रह सेट अप पछि ...
अर्को केहि बर्ष
अर्को केहि बर्षमा कसरी डेक्स डल उद्योग परिवर्तन हुनेछ
यस प्रकारको टेles्गलहरूले मलाई ठूलो संख्यामा सेक्स गुड़ियाहरू (मूल रूपमा मेरो घरको सम्पूर्ण कोठा) जम्मा गर्‍यो, र मैले सुरु गरेपछि यो थोरै लत लाग्यो। आधुनिक प्रेम गुड़ाहरू वास्तव मा अब यस संग प्रासंगिक छन्। यो एक पुतली हो जुन हरेक विवरणमा वास्तविक महिलाको नक्कल गर्दछ। यस सेक्सन गुड़ियाले रबर पुतलीसँग केही गर्नुपर्दैन, जुन अधिक बेलुन टि जस्तो हुन्छ ...
वास्तविक जीवन व्यक्ति
तिनीहरू वास्तविक जिन्दगी व्यक्तिको जस्तो सेक्स डोल महसुस गर्छन्
आधुनिक सेक्सन पुतलीहरूको जटिलताको तुलनामा, दशकौं पहिलेदेखि नै सेक्स पुतलहरू कुनै श doubt्का छैनन् - तर के यो २० वर्ष पछि बजारमा हुने यौन पुतलहरूमा पनि लागू हुनेछ? तपाईलाई लाग्दैन उनको संक्रमण कडा छ? यदि तपाईं अन्ततः यो मनपराउँदछ भने, यसले धेरै मद्दत गर्दछ। तपाईं अनलाइन सेलिब्रेटीहरूको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? यी प्रेमका पुतलीहरू यथार्थपरक छन् कि धेरै व्यक्तिहरू ...
सेक्स डल अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रा चीज मध्ये एक हो
धेरै खोज र सोच पछि, मैले एउटा किनेको निर्णय गरें, तर यसको एक पैसा खर्च भयो, र जब यो आइपुग्यो, यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा तातो चीज मध्ये एक थियो। जब व्यक्तिहरूले वास्तविक पुतलीको बारेमा सोच्दछन्, धेरै व्यक्तिहरूले फुलेको पुतलीको बारेमा सोच्दछन्, जसलाई कहिलेकाँहि "नाविक दुलही" पनि भनिन्छ। के यो तपाईलाई भयो? के तपाईंले एक वास्तविक सेक्सन पुतली प्रयोग गर्ने बारे सोच्नुभएको छ?
सेक्स डलसँग छिटो र अझ राम्रो इनोभेसनस र सुधारहरू छन्
हामी अब एक रमाईलो समय मा छौं, र प्रगति र उन्नत टेक्नोलोजिकल क्षमताको अर्थ पहिले भन्दा द्रुत र उत्तम नवीनता र सुधार हो। सुपर सेक्सी अनलाइन सेलिब्रिटी, एक अद्भुत शरीरको साथ, उनीसँग युवा प्रशंसकहरूको विशाल टोली छ, र धेरै प्रतिभाशाली छ। बजारमा पहिले कहिल्यै त्यस्तो यथार्थपरक सेक्स रोबोट गुडिया थिएन। धेरै ग्राहकहरु पनि फोर्ज ...
सेक्स डल प्रोफेशनल
टाढा सेक्स डल प्रोफेशनल वा अन्य कारणहरूको कारण
अवश्य पनि, यो सेक्स पुड़ाहरू ("प्रेम गुड़िया" को रूपमा पनि चिनिन्छ) संग हुँदैन। यो तपाइँको पार्टनर हो तपाइँ सधै उहाँसँग हुन सक्नुहुन्छ! हामी अश्‍लील चलचित्रहरूमा जे देख्छौं त्यसलाई मनपर्दछौं, तर प्रेमिका र भगिनी हाम्रो फोहोर दिमागले सोच्न सक्ने हिचकिचाउँदछन्। तर तपाईंको साथी पेशेवर वा अन्य कारणले टाढा छ, र तपाईं हाल एक्लै बस्नु पर्छ। Y ...
यस पुतलीले सेक्स टोय उद्योगलाई सँधै परिवर्तन गर्दछ
वर्षौं बित्तिकै, सेक्स पुत्रा डिजाइन र जटिलताको मामलामा लामो यात्रामा आएका छन्। ब्रान्ड नयाँ WM डॉल धेरै सेक्सी छ, उनको आकार अतुलनीय छ, र सबै कुरा तपाईंको नियन्त्रणमा छ। सेक्सट पुतलीको दुनिया फेरि कहिलै मिल्दैन। होईन, यो सबै केवल एक मात्र पुतली को लागी धन्यवाद। यस पुतलीले सधैं खेलौना उद्योग परिवर्तन गर्दछ। के तपाईं खरीदको विचार गर्दै हुनुहुन्छ ...
सेक्स डल ईर्ष्स
सुस्त सेक्स डल दैनिक जीवनमा निश्चित परिवर्तनको लागि ईर्ष्या गर्दछ
महिलाहरू अद्भुत प्राणीहरू हुन्, तर कहिलेकाँही तिनीहरू निराश हुन्छन्। यो हुन सक्छ कि तपाइँ प्रायः तपाइँको साथीलाई चिन्नुहुन्न, जसले बोलेर बोक्न सक्छ र अन्ततः सम्बन्धको अन्त हुन्छ। तपाईंको सेक्स लाइफ के हो, सबैले बढि वा राम्रो सेक्स गर्न सक्दछन्। तपाईं एक बलियो महिला हुनुहुन्छ, तर के तपाईं केही दिन भित्र काँध झुकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? वा तपाईं एक ...
सेक्स डल सम्झौता बिना सम्झौता गर्न सकिन्छ
पूर्ण सेक्सन पुतली भन्दा भण्डार गर्न सजिलो छ, र यो आधा मूल्य भन्दा बढी छ, ताकि तपाईं सम्झौता बिना सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। सेक्स डल्स एक प्रकारको कामुक खेलौना हो जसले सेक्सलाई बढाउन र सहन गर्न सक्दछ। तिनीहरू एकल र चालीस वर्षका मानिसहरू माझ लोकप्रिय छन्। धेरै व्यक्तिहरूको लागि, एक सेक्स पुच्छुको कुरा अनौंठो देखिन्छ। सबै पछि, यो एक निजी वस्तु हो। गर्छ ...
सेक्सट डॉलले तपाईंलाई कुनै पनि समय अनन्त रमाइलो दिन्छ
यो सेक्सन गुड़िया अविश्वसनीय मूल्यको छ र सीमित भण्डारण ठाउँ र कडा बजेटहरूको लागि उनीहरूलाई उत्तम छ। आफ्नो आँखा बन्द र तपाईं निश्चित रूप मा लाग्छ तपाईं एक वास्तविक महिला संग यौन सम्बन्ध राख्नु भएको छ। भिन्नता यो हो कि यी पुतलीहरूले कहिले पनि होईन भन्छन्। भावनात्मक वास्तविक प्रेम गुड़िया तपाईं खुशी बनाउँछ। सेक्स डल्स अविश्वसनीय यथार्थपरक र प्रयोग गर्न सजिलो छ, सेक्स डल ...
कुनै पनि अन्य सेक्सट डॉल सेक्स पोजिसनको साथ खेल्नुहोस्
अन्तिम तर कम्तिमा होइन, सेक्स डल्ससँगको सम्बन्धहरूले पनि यो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईंले आफ्नो दिन राम्रो मुडमा सुरू गर्नुभयो र तपाईंको दैनिक जीवनमा अधिक गर्नुहोस्। हो, तपाइँको प्रेम गुडिया संग बस्न छोटो समय मा तपाइँको उत्पादकता सुधार गर्न सक्छ। तपाईं मिसनरी, कुकुर-शैली सेक्स पुतली, वा कुनै पनि अन्य सेक्सट पुतल सेक्स स्थिति संग तपाईं मनपराउन र संग सहज हुन सक्छ संग खेल्न सक्नुहुन्छ।
वास्तविक कुरा भन्दा
सेक्स डल वास्तविक चीज भन्दा नजिक छ
जब हामी भेटेका थियौं, हामीले एक अर्काको द्रुत मुटुको धड्कन, कोमल चुम्बनहरू महसुस गर्‍यौं, र वसन्तको सुन्दर दृश्यमा प्रवेश गर्‍यौं, र तपाईं र म जोशले भरिन थाल्यौं। हामीसँग पछिल्लो पुतली सूची छ भनेर निश्चित गर्न हाम्रो उत्पादन दायरा निरन्तर जाँच गर्नुहोस्। तपाईं पुतलीबाट अधिक प्रयोग मूल्य पाउनुहुनेछ, जुन तपाईंकै सब भन्दा राम्रो लगानी हुनेछ। केहि नजिक छैन ...
यदि सेक्सट डोलमा लुगाहरू तपाईंलाई मोहित पार्न सक्दछन्
आजको लागि, त्यहाँ दुई प्रकारका यौन पुतलीहरू छन्, इन्फ्लेटेबल पुत्रा सहित, जुन व्यावहारिक हुन्छन् र प्रायः तीन प्वाल हुन्छन्। केहीका लागि तिनीहरू यथार्थपरक हुन्छन् कि तिनीहरू वास्तविक महिलाको शरीरले पत्ता लगाउन सक्दैनन्। भावुक यौनको बारेमा सोच्नुहोस्। तपाईलाई मन पराउने साथीको साथ यौन सम्बन्ध राख्नुहोस्। पछिल्ला वर्षहरुमा प्रविधि को विकास वास्तव मा inc गरिएको छ ...
मुखमा पुग्दा सेक्स डल परिष्कृत हुन्छ
उनको योनी र गुदामा पसलहरूका किनारहरू समावेश गर्दै, जसले अक्सर महत्त्वपूर्ण सहयोगीहरू गुमाएकाहरूलाई मद्दत गर्न सक्छ, जस्तै मृत महिला। तिनीहरू यती वास्तविक हुन्छन् कि उनीहरू विश्वका धेरै मानिसहरूका लागि सर्ोगेट आमाहरू बन्न सक्दछन्। केवल उच्च-अन्तका पुतहरूले स्पष्ट शारीरिक अपील गरेको कारणले होईन, तर भावनात्मक जडानहरू पनि जुन मैले कुरा गरिरहेको छु ...
सर्वश्रेष्ठ सेक्स लाइफ
सेक्स डल एक लाइफटाइम को सर्वश्रेष्ठ सेक्स जीवन हुनेछ
यी पहिलो यौन गुड़िया र्यागहरूमा छन्। पछिल्ला दस बर्षमा, यो एक अर्थ मा एक कला रूप बन्न शुरू भएको छ। र, पक्कै पनि, जब तपाईं सेक्स पुतलहरु चुन्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो जीवनको सबै भन्दा राम्रो सेक्स लाइफ पाउनुहुनेछ। मलाई यो सेक्सट गुड़िको धड धेरै मनपर्ने अनुकूलित कम्पोनेन्टहरू मनपर्दछ त्यसैले तपाईं आफ्नै बनाउन स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। यो यति नरम र अत्यधिक यथार्थवादी छ कि यस्तो लाग्छ ...
महिला यौन पुतली उनीहरूको यौन कार्यहरू पूरा गर्न
सही सेक्सन पुतल खरीद गर्नाले तपाईंको व्यक्तिगत खुशीको लागि चमत्कार गर्दछ। तपाईले पुतलीलाई यस्तो तरिकाले कदर गर्नुहुन्छ जुन धेरै मानिसहरूले कल्पना गर्न सक्दैनन्। तपाईं एक वास्तविक सम्बन्ध बनाउनुहुनेछ र तपाईं र उनको बीच एक साँचो साझेदारी बनाउनुहुनेछ। उत्कृष्ट, यथार्थपरक मनोरन्जनकारी र एन्टिफाउलि materials सामग्रीका लागि मेडिकल ग्रेड सिलिकोनहरूको मजा लिनुहोस्, जसको मतलब खुट्टा र खुट्टाd...
यी सेक्स डल्सले धेरै गर्लफ्रेंडको नक्कल पनि गर्न सक्दछ
तिनीहरूले मेरुदण्ड काम्छ जब तपाईं तिनीहरूको प्रामाणिकता महसुस गर्नुहुन्छ। सिलिकॉन छालामा प्राकृतिक छाला जत्तिकै र color र बनावट हुन्छ, र यसले पछिल्लो विवरणहरू (शिरा, अरोला र निप्पल्सको रंग, योनी ओठको रंग, गुदा) को पुनरुत्पादन पनि गर्न सक्छ। केही व्यक्तिहरूका लागि यी यौन पुत्राले धेरै गर्लफ्रेन्डहरूको नक्कल गर्न पनि सक्छन्, त्यसैले उनीहरू अब वास्तविक गर्लफ्री चाहँदैनन्।
सेक्स डल लाइफ र डेथ च्वाइस प्रत्यक्ष छनोट
यसले उनीहरूलाई थोरै मित्रता ल्याउन सक्छ, तिनीहरूलाई निहिलिष्ट बन्न मद्दत गर्दछ, र जब तिनीहरू व्यस्त हुन्छन्, उनीहरूलाई त्यहाँ साथी जस्तो देखिन सक्छन्। तपाईंले हार्ट सर्जन छनौट गर्नुभएझैँ पुतलीलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नुपर्दछ। यौन पुतल किन्नु भनेको जीवन र मृत्यु विकल्पको लागि प्रत्यक्ष विकल्प नहुन सक्छ, तर यसलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नुपर्दछ। यसलाई लक्जरी भनिन्छ ...
टाईप सेक्स डल
सेक्स प्रेमी पूर्ण सेक्स सेक्स गुड़िया को पूर्ण
उनको कडा बिल्ली, बट र मुख समात्नुहोस् र उनलाई हराइरहेको के ठीक देखाउनुहोस्। यो अनुकूलन योग्य, प्रयोग गर्न सजिलो, र आदर्श अवस्थित छ, र यथार्थपरक हो कि यो बिर्सनु गाह्रो छ कि उनी कहिलेकाँही यौन पुतली हुन्। सिलिकॉन पुतली वास्तविक महिलाको उत्तेजना र भावनाहरूको पुनरुत्पादन गर्न डिजाइन गरिएको हो। तसर्थ, यो एक समान मिल्दोजुल्दो गरीएको छ कि ...
सेक्स को रूप को रूप मा निश्चित रूप मा एक उपयुक्त विकल्प छ
धेरै पुरुषहरूका लागि तिनीहरू वास्तविकताका लागि चाहन्छन्, तर तिनीहरू महिला र समाजको दबाबको सामना गर्न चाहँदैनन्। केही पुरुषहरू मानिससँग बस्न चाहँदैनन्, र यी प्रेम गुड़ाहरू प्रायः यत्ति पहिचान गर्न योग्य हुँदैनन् कि तिनीहरू पक्कै पनि उपयुक्त विकल्प हुन सक्छन्। यदि तपाईंले पहिले कहिल्यै सेक्सल पुतल किन्नु भएको छैन भने, तब म तपाईंलाई एउटा कुरा भन्न सक्छु-जबसम्म तपाईं सेक्स डल अध्ययन गर्नुहुन्न ...
तपाईंको सबै कल्पनारम्य
सेक्सट डल प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंको सबै कल्पनाहरू पूरा गर्न
तपाईं उनको आकर्षक प्रलोभनमा पर्नुहुनेछ। सिलिकॉन पुतलीले कहिल्यै इन्कार गर्दैन, तपाईं यसलाई तपाईंको सबै कल्पनाहरू पूरा गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो सामान्यतया केहि पुरुषहरूको लागि अत्यधिक हुन्छ जसले यसलाई प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ, र प्राय: जसो कारण पुरुषहरू महिलामा पुग्न हिचकिचाउँदछन्। व्यक्तिमा एक गल्तीको माध्यमबाट जाँदै (वास्तवमै बहु पटक) र गल्तीहरूबाट सिक्दै, जुन ...
तपाईंको अगाडी सेक्स डल आश्चर्यजनक शरीर
वास्तविक महिलाले पनि सेक्स गर्न सक्दछन्। वास्तविक महिलाहरूमा प्राय: धेरै सामानहरू हुन्छन्, जस्तै विगतका सर्तहरू, घटनाहरू र धेरै समस्याहरू। तपाईको कडा मेहनत गरेको पैसा तपाईलाई मन नपरेको बाहेक केवल इसलिए मात्र होइन, तर सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, तपाईले सबै सफल पुतलीहरू कुरा गरिरहनु भएको जडान र साझेदारी फेला पार्न सक्षम नहुनाले तपाईं निराश हुनुहुन्छ। एक पटक ...
वे सेक्स डल्स
द वे सेक्स डल्स र पार्टनर्स सिमुलेट थ्रीसोम्स
यदि तपाइँ अनुसन्धान प्रक्रिया छोड्नुहुन्छ र केवल अनौठो रूपमा पुतली छान्नुहुन्छ, कोही पनि तपाइँको व्यक्तिगत खुशीको ग्यारेन्टी दिन सक्दैन। वास्तवमा तपाई पहिले भन्दा धेरै निराश हुन सक्नुहुन्छ। धड भण्डारण गर्न, सफा गर्न र प्रयोग गर्न सजिलो छ। एक्लो वा पार्टनरको साथ प्रयोगको लागि महान, यो म कसरी एक सेक्स गुडिया र पार्टनरको साथ एक थ्रिई सिमुलेट गर्छु। त्यसकारण, पुतली को आवश्यकता अनुसार संचालन गर्न सक्छन्। संग ...
कम्पनी Pessure सामना नगरी नै सेक्स डोलमा सार्नुहोस्
यो वास्तवमै ठूलो छ। यौन पुतली यथार्थ हो कि यसलाई भित्र र बाहिर धकेल्दा खुशी हुन्छ, र तत्काल तातोमा "छाला" मा थप्पड दर्शनीय महसुस गर्दछ। भिजुअल रूपमा, सिलिकॉन पुतली वास्तविक महिलाहरूसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ। हड्डीको लागि, यो नरम तर संक्षारण प्रतिरोधी धातुबाट बनेको हुन्छ र सिलिकॉनको मोल्डिंगको माध्यमबाट पुतलीमा एकीकृत हुन्छ। मानिसका लागि ...
लगानीको स्तर जुन सेक्स डोल छ र खर्च गर्न इच्छुक छ
यो तपाईंसँग लगानीको स्तरमा निर्भर गर्दछ र खर्च गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ। यो अब विनाइल इन्फ्लाटेबल गुडियाको समान प्रकारको छैन, यो पूर्ण छ र about० किलोग्राम तौलको छ। एक सेक्सट पुड़ियाको साथ, तपाईं यस महिलालाई कुनै अन्य समस्या बिना छोड्न सक्नुहुन्छ। केही पुरुषहरूको लागि, मुकाबिला गर्न अक्सर अप्ठ्यारो हुन्छ किनकि तिनीहरू आफैं नै दुर्भाग्य भोग्छन् वा ...
उत्तम पुत्रीलाई खोज्नको लागि सेक्स डल संघर्ष गरिरहेको छ
सायद लामो समयदेखि उनीहरूले उत्तम महिला फेला पार्न प्रयास गरिरहेका थिए, तर तिनीहरूले पाउन सक्दैनन्, किनकि यो उनीहरूले फेला पार्न सक्ने कुरा होइन। कहिलेकाँही मार्ग पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ, तर धेरै मानिसहरूले प्राय: सिलिकॉन पुतलीहरू प्रयोग गर्छन्। एक सेक्स पुत्री, जसलाई एक प्रेम गुडिया पनि भनिन्छ, एक यौन खेलौना हो, हस्तमैथुनको लागि प्रयोग हुने वास्तविक मानवसँग मिल्दोजुल्दो। यदि तपाईंसँग वास्तविक आधारभूत बजेट छ, ...
सेक्स डल वास्तविक व्यक्ति जस्तो देखिन्छ
तिनीहरूले यो परीक्षण र त्रुटि मार्फत सिक्छन्, तर कहिलेकाँही यो धेरै पीडादायी हुन्छ। अहिले सम्ममा मैले झन्डै एक दर्जन पुतलीहरू खरीद गरें, र प्रत्येक खरीदको साथ, म बढी विश्वस्त महसुस गर्छु। अब पुतली किन्नु पर्दा, म कहिले पनि भित्री र शful्का लाग्दिन। त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्, तर यो सबै तपाइँको आवश्यकताहरू र तपाइँ खर्च गर्न सक्नुहुने पैसामा निर्भर गर्दछ। सिलिकॉन गुड़िया यथार्थपरक पुतली हो, ...
सेक्स डल्स शरीरमा धेरै रमाईलो छ
यदि तपाईंको खुट्टा र खुट्टाले तपाईंको शरीर खोल्दछ भने, त्यसपछि तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्ने केहि खोज्नुहोस्, र यदि यो गधा र योनी मात्र तपाईं चाहानुहुन्छ भने, तपाईंलाई धड सेक्स पुतल मनपर्न सक्छ। यो सेवाहरू तपाईंलाई आवश्यक रूपमा धेरै पटक प्रदान गर्दछ र यसले तपाईंलाई सबै रमाईलो ल्याउँछ। थप रूपमा तपाई यसलाई कपडा र अधोवस्त्र लगाउन सक्नुहुन्छ। पुरुषहरू पनि प्रायः विश्वास गर्छन् कि वास्तविक महिला हा ...
सम्मानित कम्पनीबाट सेक्स डल किन्नुहोस्
यो उद्देश्य युरोपमा नाजी आक्रमणको बेला जर्मन सेनाको यौन आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नु थियो। एक सेक्स पुत्रीका लागि हताश, म केवल सम्मानित कम्पनीहरूबाट खरीद गर्नेछु, किनभने धेरै पटक, थोरै ज्ञात कम्पनीहरूबाट सस्तो यौन पुतलहरू हानिकारक र विषाक्त हुन सक्छ। मेरा सबै यौन खेलौनाहरू १००% सुरक्षित छन्। तपाईंले यी परीक्षणहरू जाँच गर्नु पर्छ कि तिनीहरू वास्तविक हो र वाणिज्य होईन भनेर ...
के सेक्स डलले धेरै पुरुषहरूलाई मद्दत पुर्‍याउँछ जो टरबुलन्सको अनुभव सम्बन्ध निर्माण गर्दछ
उनीहरू बिक्रि हुनुभन्दा धेरै अघि, सिलिकॉन पुतलीहरू उनीहरूले आवश्यक मापदण्डहरू (स्पर्श, अनुभूति, इत्यादि) पूरा गरे कि गर्दैनन् भनेर परीक्षण गरिएको थियो। तपाईंले खानको निम्ति यसलाई लिन आवश्यक पर्दैन, र तपाईंले उनको सासू-ससुरा वा राम्रो साथीहरूसँग व्यवहार गर्नु पर्दैन जसले उनको साहसलाई घृणा गर्नुहुन्छ, किनभने यो कुनै अर्थ राख्दैन। जे भए पनि यसले धेरै पुरुषहरूलाई मद्दत पुर्‍याउन सक्छ जो अशान्तिको सामना सम्बन्ध निर्माण गर्न ...
तपाईको आफ्नै खरीद बनाउनु भयो भनेर निश्चित गर्न सेक्स डॉल
त्यसोभए तपाईंको पुतल खरीद छनौटहरूसँग व्यवहार गर्नुहोस् जसरी तपाईंले कार किन्नुहुन्छ केही छनौट गर्नका लागि, प्रत्येक पुतलीको फाइदा र हानिहरूको मूल्यांकन गर्नुहोस् र अर्डर गर्नुहोस्! धेरै जसो सेक्स पुत्रीहरू एक नि: शुल्क मर्मत किटको साथ आउँदछन्, तथापि, सँधै चिकनाई तेल प्रयोग गर्न, सेक्सट पुतल सफा गर्न, सेक्सट पुत्रीलाई राम्रोसँग भण्डारण गर्न, र यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि यो कुनै पनि बिना भण्डारण गरिएको छ।
दायाँ डेक्स फोल
सहि डेक्स फोल छनोट गर्नु सधैं सजिलो हुँदैन
"सेक्सट पुतली" नाम आफैंले सts्केत गरे जस्तै, तिनीहरू मुख्य रूपमा मालिकको यौन इच्छा पूरा गर्नका लागि आविष्कार गरिएका थिए। तपाईंको लि sex्गको खेलौनाको ख्याल राख्नु महत्त्वपूर्ण छ यो निश्चित गर्नका लागि कि यो कुनै धेरै आँसुहरू बिना नै धेरै वर्षसम्म रहन्छ। तपाईं उसको घुँडा, स्क्वाट, वा घुँडा टेक्न सक्नुहुन्छ, तपाईं मा निर्भर गर्दछ। जे भए पनि, यो प्राय: एक पुरुषको लागि गाह्रो हुन्छ, र यदि तपाइँ जू ...
उच्च गुणवत्ताको सेक्स डल र लगभग उत्तम समाप्त
तपाइँसँग विभिन्न प्रकारको रमाईलो छ भनेर निश्चित गर्न सिलिकॉन गुड़ाहरूले बिभिन्न स्थानहरू समात्दछन्। उनीहरूले आफ्नो सृष्टिको पछाडि ठूलो प्रगतिहरू पनि गरे। आज, प्रायजसो पुतलीको दुई अलग छाला प्रकारहरू हुन्छन्, जसमध्ये एक वास्तविक हो र शरीरभरि फैलिन सक्छ। यसको सट्टा, १ dol औं शताब्दीमा एक्लो र कुख्यात डच नाविकहरूले यौन पुतलीहरू आविष्कार गरेका थिए। जे भएपनि, ...
र सेक्स डल वास्तविक महिला देखिन्छ
हो, तपाईं नजिकै सुत्न सक्नुहुन्छ, तर कहिलेकाँही मानिस चाँडै रिडिम गर्न चाहन्छ। प्रेम पुतलीका लागि, तपाईं प्रायः सही समाधान हुनुहुन्छ किनभने तिनीहरू धेरै वास्तविक छन् र वास्तविक महिलाहरू जस्तो देखिन्छन्। यो केहि मानिसहरु भन्छन्। यद्यपि सत्य यो हो कि धेरै व्यक्तिको विपरीत हिटलरले यौन पुतलिको आविष्कार नगरेको हुन सक्छ। जे होस्, उसले giv गर्न सक्ने एक पुतली चाहान्छ भने ...
त्यसो भए TPE सेक्स डल समस्या समाधान गर्न सक्दछ
पुतली मन पराउनुहोस्, तर तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि ती विदेशमा छैनन्, डेटि with गर्न सक्नुहुन्न, र उनीहरूको पार्टनरहरूसँग हुन सक्दैन। यो सम्बोधन गर्न हिटलरले नाजी पैदल सेनालाई यौन गुडिया दिए जसले अन्तर्राष्ट्रिय योनीको अन्वेषण गर्न सिपाहीहरूलाई आवश्यक पर्ने कुनै पनि चीज हटाईयो। जब एक TPE पुतल वा सिलिकॉन गुडिया किन्न भनेर सोधिंदा, विकल्प t को आवश्यकतामा आधारित हुनेछ ...
सेक्सन डोल एक्लो समय र उर्जा आवश्यक छ
पारस्परिक सम्बन्धलाई समय र उर्जा चाहिन सक्छ जुन एकसँग छैन। केही पुरुषहरूको लागि, यो एक महिलाको लागि वास्तविक यौन पुतली छनौट गर्न अनौंठो लाग्न सक्छ। यदि सैनिकहरूले युरोपेली महिलाहरूलाई गर्भधारण गर्न थाल्छन् भने, उनीहरूका बच्चाहरू अनिवार्य रूपमा मिश्रित हुनेछन्। हाम्रो दृष्टिकोण को दृश्य दृष्टिकोण बाट संचालन हुन्छ, संचालन, र पुतली को माध्यम को माध्यम ले जान्छ ...
अविस्मरणीय सेक्स लाइफ
सेक्स डलले एक अविस्मरणीय यौन जीवनको प्रतिज्ञा गर्छ
लस एन्जलस वा कहिँ पनि एस्कर्ट गर्न तपाईले गर्न सक्नुहुने छ चीजहरू रमाईलो छन्। उनको सुन्दर अनुहार अनुभवी शिल्पकारले कुँदेका थिए। यी पुतलीहरूले तपाईंलाई अभूतपूर्व अनुभव ल्याउँदछन्। तपाईंले अधोवस्त्रमा रेडहेड कहिल्यै देख्नु भएको छैन, तर सिलिकॉन डॉलहरू तपाईंलाई चाहिन्छ। वास्तवमा, सबैभन्दा रमाईलो सामग्रीको श्रृंखलाको साथ आउँदछ। यौन पुतली p ...
तपाईंको सेक्सन डल
तपाईं आफ्नो सेक्सन गुड़िया संग अधिक गर्न सक्नुहुन्छ
बहुविवाहित मुलुकमा लोग्नेमान्छे नभई बहुविवाह गर्न रुचाउने मानिसहरू पुरुषहरू धेरै निराश हुन्छन्। आधुनिक पुरूष "खुशीको खोजी" को एक चीज हो सेक्स गुड़ाहरू। बजारको बढ्दो मागसँगै, सेक्स डल्सको गुणस्तरमा ठूलो सुधार भएको छ। आकार र स्पर्श को मामला मा, यो वास्तविक जीवन हो र धेरै मानिसहरू सुखद आश्चर्यचकित छन्। अफ्ट ...
सेक्स डल सबैभन्दा वास्तविक सिलिकॉन मानिन्छ
चीनका कारखानाहरूमा, पुतली ग्राहकहरूको इच्छा अनुसार बनाईन्छ। अब तपाईंसँग आफ्नो सेक्सट पुतल डिजाइन गर्ने अवसर छ। यो यथार्थवादी पुतली मूल्य र गुणमा अन्य पुतलीहरू भन्दा फरक छ। आज, यस समाजमा, तपाईले आफ्नो जीवनसाथीको सम्बन्धको लागि र पनी हेरचाह गर्न धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्दछ। तपाईंको बच्चा, तपाईंको घरपालुवा जनावर, पनि ...
सेक्स डलले काम गर्ने मोडेललाई अझ यथार्थपरक बनाउँदछ
रेडहेड्सको उत्कृष्ट प्रतिष्ठा छ, र "क्यारी-अन" पनि यसको अपवाद छैन। मलाई थाहा छ यदि तपाईं अब थाहा छ? अश्‍लील सामग्रीसँग लड्न, धेरै सामाजिक प्लेटफर्महरू र शपिंग प्लेटफर्मले अश्लीलता निषेध गर्दछ, तर यौन पुतलीहरू अश्‍लील सामाग्री होइनन्! के तपाईले कहिले सेक्सन पुत्री बनाउने योजना बनाउनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने, तपाईं एक्लो हुनुहुन्न। रिपोर्टका अनुसार, सेक्स पुत्रा पनि भोलिपल्ट बनेको छ ...
सेक्सट डोलसँग तपाईलाई खुशी पार्न चाहिने सबै चीजहरू छन्
धेरै व्यक्ति मनोरन्जनलाई गम्भीर रूपमा लिदैनन्, तर उनीहरूले लिनु पर्छ। हामी तनावपूर्ण समयमा बाँचिरहेका छौं। आराम गर्न समय लिनु महत्त्वपूर्ण छ, र साथीलाई काममा लिनु छिटो र सजिलो तरीका हो कि कसैलाई आराम र मनोरन्जन गरिएको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न। TPE एक नयाँ प्रकारको सिलिकॉन हो जुन 5.5..XNUMX गुणा लामो सम्म लामो गर्न सकिन्छ र धेरै नरम छ! मानवको लागि सुरक्षित हुन परीक्षण गरियो। यो ...
हटाउन योग्य काँध
सेक्स डल खडा हुन सक्षम छ र हटाउन योग्य काँधहरू छन्
यदि तपाईंले राम्ररी नहेर्नुभयो भने, तपाईं सोच्नुहुनेछ यो एक वास्तविक व्यक्ति हो। त्यसकारण, एक प्रेमिका वा श्रीमतीको साथ पनि, प्रायः पुरुषहरू घुम्छन् र आकर्षक महिलालाई हेर्छन्। त्यसकारण तपाईंको आँखा सेक्सी आउटफिटहरूमा महिला मोडेलहरूमा ढल्किन्छ। तपाईं आफ्नो आँखाको रंग, तपाईंको म्यान्क्योर, र मोडेल खडा हुन सक्षम हुनुपर्नेछ कि "चल चलिरहेको काँध" छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, ...
सब भन्दा उन्नत टेक्नोलोजीको साथ सेक्स डल छाला पनि मर्मत गर्न सकिन्छ
मानव जोड़हरू सिंथेटिक धातुले नवीनतम प्रोफेशनल टेक्नोलोजीको प्रयोग गरी अंगहरू विभिन्न प्रकारका आसनहरू सिर्जना गर्न स्वतन्त्र रूपमा तान्न सक्छन् भनेर बनेको हुन्छ। भिजुअल रूपमा, पुतली उत्तम छ, छाती कडा र धेरै नरम छ। हिप्स को रूप मा, ती विशेष गरी गोल, धेरै मजबूत र नरम छन्। वर्तमान यौन गुडाहरू जस्तै, उपस्थिति मात्र नजिक छैन ...
सेक्स डल एक स्थानीय साथी प्राप्त गर्नुहोस्
बाहिर जान्छ कि सिलिकॉन रालबाट बनेका यी पुतलीहरू केवल सुन्दर र आकर्षक छैनन्, तर आकर्षण र स्वभावका मानिसहरूमा पनि समान छन्। पहिलो हेराईमा, तपाईं यसलाई मुश्किलले डमीको रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मजा अनियोजित यात्राहरूको लागि साथ। के तपाई कहिल्यै नयाँ शहर अन्वेषण गर्न आइपुग्नु भएको छ र के गर्ने थाहा छैन? एस्कॉर्टहरू उत्तम गाईडहरू हुन्! चो द्वारा ...
सेक्स डल निश्चित रूपले तपाईंको आदर्श विकल्प हो
यदि तपाईं प्रेम र सबै खर्चहरूको बारेमा चिन्ता गर्न चाहनुहुन्न भने, यौन खेलौना निश्चित रूपले तपाईंको आदर्श विकल्प हो। यौन पुतलीका लागि एकमात्र भत्ता भनेको उचित भण्डारण स्थान हो जुन सफा र नियमित रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। पुतलीलाई हेरेर, हामीलाई तत्काल थाहा भयो कि हामी उच्च-अन्तका उत्पादनहरूसँग व्यवहार गर्दैछौं। वास्तवमा, अनुहारमा कुनै दाग छैन, थोरै एशियाली, आकस्मिक, सुन्दर ...
सेक्स डलले निप्पल आफैंको रंग रोज्न सक्छ
यौन पुतलीहरू हामी प्रायः फेला पार्ने कन्डम जस्तै हुन्। तिनीहरू वयस्क उत्पादनहरू हुन्। केही आवश्यकताहरू सामान्य छन् र अश्लील सामग्रीको साथ वर्णन गर्न सकिदैन। यो विकासलाई धेरै कारकहरूमा श्रेय दिन सकिन्छ, जसमध्ये सब भन्दा प्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक आयाम हो। पुरुष वा महिलाको दिमाग मानव फार्मको सराहना गर्न जोडिएको छ। जब एक सेक्सन छनौट गर्दा ...
TPE सेक्स गुड़िया नरम रबर गुड़िया सख्त हुनेछ
चिल्लो निष्पक्ष छाला चिकनी देखिन्छ र हात समात्न सक्छ। यसमा कुनै अचम्म छैन कि सेक्स गुडियाको यस श्रृंखलालाई "सिलिकन परी" पनि भनिन्छ। कोमल स्वभाव परी जस्तो सुन्दर छ। जे भए पनि, टुर गाइडले लगभग एक देखि एक ध्यान दिन सक्दैन, वा कुनै ध्यान पनि प्रदान गर्न सक्दैन। तपाईं एक समूह हुनेछ र केवल लोकप्रिय पर्यटक जाल मा जानुहोस्। त्यो वा ...
सेक्स डल सपना महिला बन्छ
यसले तपाईंलाई सपनाको महिला कल्पना गर्न अनौंठो अवसर दिन्छ जुन तपाईं चाहानुहुन्छ। गर्भ निरोधको चिन्ता नगरिकन यौन खेलौना प्रयोग गर्नुहोस्। धेरै जोडीहरूले यौन सम्बन्धमा उनीहरूले गर्भनिरोधक ठानेका छन्, र अन्ततः उनीहरूको प्रेमिका गर्भवती हुन्छन्। कन्डम फुट्यो वा महिला गर्भवती हुनको लागि। ह्यान्डलिंग को मामला मा, पुत्रा धेरै च छ ...
थप हेरचाह आवश्यक छ
साधारण Wigs जो नि: शुल्क सेक्स डल्फको साथ आउँदछ थप हेरचाहको आवश्यकता पर्दछ
कुकुर पोज भनेको म सिफारिश गर्दछु, र तपाईं सजिलैसँग यसको स्तनहरू महसुस गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै व्यक्तिको लागि जो पहिलो पटक किन्न चाहन्छन्, तिनीहरू दुबै जिज्ञासु र डराएका छन् किनकि उनीहरू उनलाई कसरी प्रयोग गर्ने वा उनलाई किन्न जान्दैनन्। त्यस्तै महिलाहरूको लागि पनि साँचो हो जसले मर्दाना आकारहरू पत्ता लगाउँदछन् तर मद्दत गर्न भने सक्दैनन् तर मांसपेशी मूर्तिकलाहरूको प्रशंसा गर्दछन्। T भन्दा बढी हेरचाहको आवश्यकता छ ...
यौन गुडी उनको स्तन ठूलो जस्तो लाग्छ
अनियोजित यात्रामा तपाईंलाई साथ दिनु तपाईंको सबै गन्तव्यहरू पूर्ण रूपमा अनुभव गर्ने उत्तम तरिका हो! सिलिकॉन पुतली प्राय: अलि कडा महसुस गर्दछन्, जबकि TPE को नरम रबर धेरै नरम हुन्छ। अवश्य पनि, सिलिकॉन पुतली पनि धेरै नरम हुन सक्छ, तर लागत धेरै बढ्नेछ; तपाइँसँग बोक्न सक्ने शक्ति निश्चित रूपमा तपाइँलाई गतिहीन छोड्नेछ। उनीसँग, से ...
सब भन्दा चाँडो मार्ग
सेक्स डल पनि सब भन्दा चाँडो मार्ग हो
उनको उदार छाती वक्र र उनको आकारले हामीलाई के गर्न सकिन्छ भनेर एक झलक दिन्छ, त्यो हो, दिमागमा आएको सबै कुरा। सब भन्दा आश्चर्यजनक कुरा के हो यो हो कि यी पुतली राम्रा डिजाइन गरीएको छ र केहि भन्नु छैन। सुन्दर कपडा लगाए पछि, तिनीहरू एक सुन्दर फोटो एल्बम जस्तै पोज! उनीहरूलाई राम्रा क्लबहरू, सफा समुद्र तटहरू, थोरै-ज्ञात पाक मा थाहा छ ...
सेक्स डल क्रिएटरले आदर्श व्यक्तिको गुणहरू व्यक्त गर्न सक्दछ
किनकि यो हस्तनिर्मित पुतली हो, यसमा लगभग कुनै त्रुटि छैन। यो गर्न घण्टा लाग्यो। थप रूपमा, यो केवल २० किलोग्रामको तौल हो, र यसको धातु कंकाल लचिलो र धेरै सुविधाजनक छ। तपाईं यसलाई ओछ्यानमा मुनिको, कोठामा वा तहखानेमा छोड्न सक्नुहुनेछ, जबसम्म तपाईं सोच्नुहुन्छ कि कोही पनि फ्लिप हुँदैन। तपाईंको सामानको स्थान। यी मूर्तिहरूले तिनीहरूका सिर्जनाकर्ताहरूलाई क्वालिटी व्यक्त गर्न सक्षम गर्दछ ...
टीपीई सेक्स डल नरम प्लास्टिक गुडिया भन्दा राम्रो सेक्स डोल प्रदर्शन
के तपाइँ बाहिर खान मनपराउनुहुन्छ? यदि तपाईंलाई विदेशी खाना मनपर्दछ र नयाँ पकवान प्रयोग गर्न मनपर्‍यो भने, अनुरक्षणको साथ नयाँ रेस्टुराँमा प्रयास गर्न रमाईलो हुन सक्छ। सिलिकॉन पुतलीले TPE सेक्स गुडिया नरम प्लास्टिक गुडाहरू भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्दछ। सामग्री थोरै कठोर भएकोले, प्रदर्शन राम्रो हुनेछ। केहि नक्कली ह्यान्डप्रिन्टहरू र विवरणहरू केवल सिलिकॉन से प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ ...
सेक्स डल सेक्सले तपाईंलाई धेरै रमाईलो दिन्छ
सेक्स गरेपछि तुरुन्तै आफ्नो बच्चालाई नुहाउनुहोस्। यसले प्राय: orifice मार्फत वीर्यलाई हटाउनु पर्छ। Inflatable पुतली वा कम-अन्तमा सिलिकॉन गुड़िया प्रयोगको तुलनामा, त्यस्ता सुन्दर पुतलीहरूसँग यौन सम्बन्ध राख्नु तपाईंलाई अझ रमाइलो बनाउँदछ। वास्तवमा, सबै चीज होशियारीपूर्वक तपाईं खुशी बनाउन को लागी योजना गरीएको छ। जे होस् म हृदयबाट जान्छु कि तिनीहरू केवल यौन घ ...
सेक्स रोबोट संस्करण
सेक्स डलले उनीहरूको सेक्स रोबोट संस्करण ल्यायो
त्यस्ता कलात्मक उदाहरणहरूका उदाहरणहरू १ 1504 1843 मा माइकलएन्जेलोले बनेको डेभिडको मूर्ति र १ GreekXNUMX मा हीराम बोवर्स द्वारा निर्मित महिला ग्रीक दासको मूर्ति सामेल छन्। साथै उनीहरूको सेक्स रोबोट संस्करण पनि आउँदछ, तर यसले शरीरको तापक्रम, ध्वनि प्रणाली र कृत्रिम बुद्धिमता पनि आउँदछ। , जसको मतलब तपाई मोडलसँग च्याट गर्न सक्नुहुनेछ। सेक्स पुतुराहरूसँग त्यो नातेदार छैन ...
सेक्स डलले यो घरमा लुकाउन सक्छ
यो पनि अविश्वसनीय लाग्यो, मलाई थाहा छैन यदि यो उनको ठूलो स्तनहरु वा उसको स्थानको कारण हो। जे भए पनि, उनीसँग उत्तम योनी, गुदा र धेरै कामुक मुख छ, र तपाई अल्छी हुनुहुने छैन। सबैजनासँग पहिलो पटक हुन्छ। यदि तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ कि कसैले तपाईंको सानो रहस्य पत्ता लगाउँदछ भने, तपाईं यसलाई घरमा लुकाउन सक्नुहुन्छ। शताब्दियौंदेखि, मानिसहरूले बनाउँदै आएका छन् र आफ्नै बनाएका छन् ...
विकास सुधार गर्दछ
विकास सुधार हुने बित्तिकै सेक्स डल ब्याज बढ्ने छ
सेक्सन डल्सले तपाईंलाई मानवीय फारामको तपाईंको कदर बढाउन तपाईंको प्राथमिकताहरूलाई फाइन-ट्यून गर्न अनुमति दिन्छ। वास्तविक प्रेमीहरू संसारभरि मिडियामा दीर्घकालीन ध्यानको विषय भएको छ। हालका वर्षहरूमा, व्यक्तिहरूले सेक्स पुतलहरू र वास्तविक प्रेमीहरूको बिक्रीमा विशेष ध्यान दिएका छन्, र हामी सुधार गर्नको लागि हालका वर्षहरूमा चासोमा बढेको देख्न सक्छौं ...
सेक्सन डले तिनीहरूलाई सफा गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई बक्समा राख्नुहोस्
यो सजिलै मौखिक सेक्स, गुदा सेक्स र क्लासिक सेक्सको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो मोडेल redheads कृपया पक्का छ। सेक्स डल्स पनि राम्रोसँग भण्डार गरिएको छ। तपाईंले भर्खरै तिनीहरूलाई सफा गरेर बक्समा राख्न आवश्यक छ। यो दृश्य यौन गुड़ियाको स्वामित्वमा लागू हुन्छ। तपाईं, मालिक, सेक्स पुत्री मोडेल छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको आदर्श सुविधाहरू दर्साउँछ।
बेलुकाको खानाको लागि आदर्श
सेक्स डल कम्पनी बेलुकाको खानाको लागि उपयुक्त छ
यदि तपाईं व्यापारको लागि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, वा केवल पत्ता लगाउँदै हुनुहुन्छ कि तपाईंको कुनै पनि साथीहरू विशेष रूपमा प्रयोगात्मक छैनन् भने, साथी भनेको उत्तम डिनर मिति हो। सिलिकॉन पुत्रा तीन देखि पाँच विभिन्न तार्बिक सूत्रहरू अनुसार तान्न सकिन्छ, जबकि TPE सफ्ट गुड़िया छ देखि आठ पटक तान्न सकिन्छ। यसैले, TPE सफ्ट रबरसँग उत्तम टेन्सिल फोर्स र अधिक v छ ...
यौन पुतल भविष्यमा महिलाको स्थिति ग्यारेन्टी गर्ने जस्तो देखिदैन
उसका स्तनहरू सुन्दर ढved्गले घुमाइएको र धेरै बलियो छन्, र योनी र गुदा विवरणहरू पूर्ण रूपमा पुनउत्पादित छन्। पछिल्लो भित्री भित्ता लचिलो र नरम छ, जसले यसलाई उपलब्ध सबै कक्षहरूको फाइदा लिन सम्भव बनाउँदछ। के यसको लायक हुन्छ? खुशी, यी नाजुक पुतलीहरू केवल "खेलौना" मात्र होइनन्। तिनीहरू एनिम केटीहरू जत्तिकै सुन्दर छन् ...
सेक्स डल यी समस्याहरूबाट बच्न सक्छ
यस तरिकाले, यी उत्कृष्ट कलाकृतिहरूले व्यक्तिहरू आफैमा राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्न सक्दछन्। कसैले जवाफ दिन सक्दैन। तपाईंको प्रश्न यसले वास्तविक शरीरको तातो बोक्छ, शरीरको अ moving्गहरू हिंड्दछ भन्ने कुराको आवश्यकता छैन। यौन प्रसारण बिल्कुल सुरक्षित छ। धेरै भाइरस यौन संभोगको माध्यमबाट उत्पन्न हुन्छन्, र सामान्यतया एक भाइरसबाट अर्को थ्रोगमा सार्न सकिन्छ भनिन्छ ...
सेक्स डल तपाईंको सबै गन्तव्यहरू अनुभव गर्ने उत्तम तरिका
बहुविवाहित मुलुकमा, रखरखावको सट्टा बहुविवाह रुचाउने मानिसहरू पुरुषका लागि धेरै निराश हुन्छन्। उनीहरूलाई राम्रा क्लबहरू, सफा समुद्र तटहरू, थोरै ज्ञात पाक मास्टरहरू, र द्रुत मार्गहरू पनि थाहा छ। अनियोजित यात्रामा तपाईंलाई साथ दिनु तपाईंको सबै गन्तव्यहरू पूर्ण रूपमा अनुभव गर्ने उत्तम तरिका हो! मूल्यमा भिन्नता: कच्चा मीटरको मूल्य ...
यी सेक्स डोलहरू बजारमा सब भन्दा राम्रो गुडाहरू हुन्
खरीदको पहिलो दिनदेखि, यौन खेलौनाहरूले यस स्थितिलाई पूर्ण रूपमा हटायो। तपाईंले श doubt्का र चिन्ता लिनु पर्दैन। के यो यौन खेलौना किन्नको लागि उत्तम कारण होईन? यदि तपाईं यौन पुत्राको पारखी हुनुहुन्छ भने, यो पुतली बजारमा सब भन्दा राम्रो पुत्रा मध्ये एक हो। तर धेरै महँगो महसुस गर्नेहरूका लागि, त्यहाँ धड पुतली पनि छ। तपाईंको बच्चा, एक घरपालुवा जनावर, को ...
सेक्स डलले शारीरिक आत्मीयताको आवश्यकता पूरा गर्दछ
यदि तपाईं आफ्नो जीवनसाथी, प्रेमिका वा प्रेमीको साथ लामो समय सम्म हुनुहुन्न भने सेक्स डल्सले महत्त्वपूर्ण सुविधा प्रदान गर्दछ। रोजगारले तपाइँलाई नयाँ शहर, राज्य वा देश सर्न बाध्य गर्न सक्दछ। ईमेल, फोन, र सन्देश सेवा प्रदायकहरूले तपाईं र तपाईंको प्रियजनहरूको दूरसञ्चार आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दछन्, र शारीरिक आत्मीयतालाई भेट्नु पर्ने आवश्यकता प्रायः समस्याको रूपमा रहेको छ ...
सेक्सट डल वेट शिल्प कौशल र निर्माताको स्तर स्तरमा निर्भर गर्दछ
तपाईं एक रेस्टुरेन्टमा जान सक्नुहुन्छ जुन गउरमेन्ट भोजन प्रदान गर्दछ जुन तपाईं परिचित हुनुहुन्न र यसलाई अर्को चरणमा लैजानुहुन्छ। यो पत्ता लगाउन रमाईलो हुन सक्छ, विशेष गरी जब तपाईंसँग तपाईंको वरिपरि राम्रा साथीहरू हुन्छन्। एकै आकारको सिलिकॉन पुत्रा निर्माताको शिल्पकला र अस्तर तहमा निर्भर गर्दै TPE पुत्रा भन्दा बढी तौल लिने छ। तर यदि तपाईं केवल चाहनुहुन्छ ...
सेक्स डल पुरुषहरुको माग गर्नको लागि उत्तम छ
केहि लेटेक्स कन्डमहरू यौन संक्रमित संक्रमणहरूबाट बच्नको लागि एक उत्तम तरिका हो, तर तिनीहरूले संक्रमणको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा हटाउँदैनन्। तपाईंसँग यसको सुन्दर पुतली छ, यसको आकर्षणको साथ तपाईंलाई खुशी पार्न तयार। तसर्थ, यी यौन गुडाहरू पुरुषहरू माग गर्नका लागि उत्तम छन्। सेक्स डल्सलाई मर्मतको आवश्यकता पर्दैन। आज यस समाजमा तपाईले एक पैसा खर्च गर्नु पर्छ ...
सेक्स डल निश्चय नै तपाईंको वफादार पार्टनर हो
अर्कोतर्फ, तपाईं जीवनको आकारको सेक्सट पुतलको खरीद गर्न सक्नुहुनेछ, जुन पुतलीको आधा मूल्यको लागि हो, र सेक्सक्स गुड़िया पक्कै तपाईंको वफादार पार्टनर हुन् किनभने तिनीहरू तपाईंकै हुन्। यदि तपाईं व्यापारको लागि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, वा केवल पत्ता लगाउँदै हुनुहुन्छ कि तपाईंको कुनै पनि साथीहरू विशेष रूपमा प्रयोगात्मक छैनन् भने, साथी भनेको उत्तम डिनर मिति हो। सिलिकॉन सेक्स गुडिया उच्च रिसाएको छ ...
सेक्सन डलले तपाईंलाई आफ्नो पति या पत्नीलाई धोका दिनबाट रोक्दछ
हालका सेक्सन पुतहरूको बाह्य प्याकेजि your्गले तपाईंको जानकारी प्रदर्शन गर्दैन। यदि तपाईं अपार्टमेन्टमा बस्नुहुन्छ र छिमेकीहरूलाई थाहा छैन कि तपाईंले केही उच्च किन्नुभएको हो भने, तपाईं आफैले रिपोर्ट गरिएको स्थान छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जसले धेरै नोक्सानबाट बच्न सक्छ। एक सेक्सन गुडियाले तपाईको कामवासना सन्तोष गर्ने टाउको हटाउँछ जब महत्वपूर्ण पार्टनरहरूबाट टाढा हुन्छ ...
भर्खर सिफारिस गरिएको